एकरातमा महिला र पुरुषले कति पटकसम्म सेक्स गर्न सक्छन् ? – Vision Khabar
एकरातमा महिला र पुरुषले कति पटकसम्म सेक्स गर्न सक्छन् ?
। २१ भाद्र २०७५, बिहीबार १९:५९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सेक्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न ।
तर याद गर्नुहोस तपाईंका प्रत्येक स्पर्ष अति नै नरम र सरल हुनुपर्छ किनकी छालाले नै तपाईले दिएको प्रत्येक झड्कालाई मष्तिष्कसम्म पुर्याउने काम गर्दछ । अण्डहरुलाई जोशमा कहिले नि थिच्ने अनि चेप्ने गर्नु हुँदैन जसले पुरुष मित्रको यौन प्रतिको जोशलाई तत्काल नै खत्तम गरिदिन्छ । एक बयसक युवा तथा युवतीले एक रातम सरदर ६ कटक सम्म सेक्स गर्न सक्ने अध्यनाले जनाएको छ
आफ्नो मित्रलाई सधैं सोध्नुहोस कि तपाईंलाई उनको स्तन चुस्नको लागि अनुमति छ कि छैन । किनकी त्यो सबैलाई मन नपर्न सक्छ । मञ्जुर भएको खण्डमा जिब्रोको टुप्पोले सुस्तरी स्तनको मुन्टोलाई खेलाउनुहोस् । यो गुद्वार र अण्डकोष बीचको भाग हो । औंलाहरुले उत्सर्गतरालको बिचभागमा हल्का दबाव दिन्स् ।
फलस्वरुप तपाईंको यौन साथीको लिंगलाई सधैं खडा गरिरहन्छ । तत्पश्चात तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरलाई यौनको मज्जा लिनरदिन सक्नुहुन्छ ।